Saturday June 15, 2019 - 14:54:45 in Wararka by Wariye Qoslaaye
Maamulka Degmada Gaalkacyo ee dowlad Goboleedka Galmudug ayaa ka hadlay Dil wadareedkii xalay Magaalada Gaalkacyo loogu geystay 9 ruux oo shacab ah iyo dilka Sarkaal ka tirsan Ciidanka nabadsugida Galmudug.
Xirsi Yuusuf Barre oo ah Duqa Degmada Gaalkacyo oo Shir Jaraa’id warbaahinta ugu qabtay gudaha Isbitaalka weyn Gaalkacyo ayaa waxaa uu sheegay in dadkii xalay halkaasi lagu laayay ay ahaayeen dad shacab ah oo ka soo kala jeeda maamulka Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed,kuwaasi oo kamid ahaa dadka deegaanka Gaalkacyo.
Sidoo kale Duqa Gaalkacyo ayaa waxaa uu sheegay inuu aad uga xun yihiin falkii loo geystay 9 qofkii,isla markaana waxaa uu tacsi u diray dhammaan Eheladaii iyo qaraabadii ay ka baxeen dadkaas.
Isaga oo sii hadlaayay Xirsi Yuusuf Barre ayuu maamulada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed u cadeeyay in ka maamul ahaa ay tallaabo adeg ka qaadi doonaan dadkii ka dhambeeyay dhacdadii foosha xumeyd,wuxuuna ugu baaqay dadka ka soo jeeda maamuladaas eek u sugan Galmudug inay is dejiyaan.
Dhinaca kale Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Galmudug Col-Cabdi Jaamac Cabdulle Xabeeb oo isna Warbaahinta la hadlay ayaa ka tacsiyadeeyay dadkii lagu dilay Gaalkacyo oo ugu horeeyay Saraalkii ka tirsanaa Ciidanka nabadsugidda Galmudug.
Sidoo kale Taliye kuxigeenka ayaa waxaa uu tilmaamay inaysan raali ka aheyd wixii xalay ka dhacay Gaalkacyo,isla markaana xusay inay wadaan baaritaano kala duwan oo ay ku soo qabanayan dadkii ka dambeeyay dilalkii ka dhacay Magaalada Gaalkacyo ee Gobolka Mudug.
Tirada dadka lagu diley duleedka magaalada Gaalkacyo xalay ayaa gaartay 13 ruux iyadoo hore wararkii u soo baxayay ay sheegayeen in tirada dadka la diley ay ahaayeen sagaal ruux oo ka soo jeeda gobolada Koofurgalbeed.
Hase yeeshee wararka u dambeeyay ee ka imanaya magaalada Gaalkacyo ayaa sheegaya in dadka la diley ay gaarayaan 13 ruux halka midkalna uu dhaawac soo gaaray.
Khamri Tiro Badan oo Maanta Lagu Bur Buriyay Magaalada Dhuusomareeb -Sawirro
15/10/2019 - 18:12:09